Ciidamo ku wajahan deegaanada Alshabaab ku xoogan yihiin oo lala Dar daarmay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciidamo ku wajahan deegaanada Alshabaab ku xoogan yihiin oo lala Dar daarmay
Ciidamo ku wajahan deegaanada Alshabaab ku xoogan yihiin oo lala Dar daarmay
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) ayaa tababar usoo xiray ciidamo cusub oo katirsan Daraawiishta Jubbaland, kuwaa oo mudooyinkii lasoo dhaafay tababar uga socday xero kutaala magaalada Kismaayo.
Ciidamadan cusub ee tababarka loo soo xiray ayaa loogu tala galay in ay ka qeyb qaataan howlgalo ka dhan ah Al Shabaab oo maamulka Jubbaland ku doonayo in uu ku xureeyo deegaanada maamulkaasi ee gacanta ugu jira Al Shabaab.
Axmed Madoobe oo la hadlay ciidamadan ayaa kula dar daarmay in ay u diyaar garoobaan howlgalo ay ku xureenayaan deegaanada Al Shabaab maamulaan, waxa uuna ciidamada faray in si wanaagsan shacabka ula dhaqmaan inta ay howlgalada ku jiraan.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa marar badan ku dhawaaqay howlgalo ka dhan ah Al Shabaab, mana sameyn maamulkiisa mudooyinkii dambe wax howlgalo ah, waxaana xusid mudan in gacanta Jubbaland aysan ku jirin gobolka Jubada Dhaxe.
Previous articleWadooyinka Muqdisho oo xiran xili magaalada mu soo wajahan yihiin Dani iyo Ahmed Madoobe
Next articleAhmed Madoobe oo Ciidamo Tira badan u soo daabulay magaalada Muqdisho
Ciidamada Kenya ee ku sugan Gedo oo Dil iyo dhaawac dad shacab ah ugu geystay deegaanka Yeedow
Gudoomiyaha Maxkamada Sare oo ka Digay in ay Qaadiyaasha Isticmalaan Baraha...
XOG: Farmaajo oo xalay u sheegay saaxiibadii in xilka R/wasaaraha u...